ဧသတာဝတ္ထု ၆ – The Believer’s Bible Commentary – Myanmar
By ယုံကြည်သူသမ္မာကျမ်းအနက်ဖွင့် Published February 22, 2018 ဧသတာဝတ္ထု
(ခ) ဟာမန်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့် မော်ဒကဲ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ (အခန်း ၆)
၆:၁–၃ ဟာမန်သည် အားရကျေနပ်စွာ အိပ်ပျော်နေသော်လည်း ဘုရင်အာရွှေရုသည် အိပ်မရသောကြောင့် အစီရင်ခံစာအမှုတွဲများကို တခုပြီးတခု ဖတ်ရှုသည်။ ဗိဂသုန်နှင့် တေရက်က ဘုရင်အား လုပ်ကြံဖို့ကြံစည်နေကြစဉ် သတင်းပေးသူမှာ မော်ဒကဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိဖတ်ရှုသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ယခုမော်ဒကဲအား မည်သည့်ဆုလက်လက်ဆောင် ချီးမြှင့်ပြီးကြောင်း မေးမြန်းရာ ဆုလက်ဆောင် ပေးခြင်းမရိသေးပါ။
ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ J.G.Bellett ၏ စကားကိုမှတ်သားသင့်သည်။
ဤနေရာတွင် ရင်တုန်မိန်းမော ဖွယ်ရာတွေ့ရသည်။ ဇာတ်လမ်းထဲတွင် မြှုပ်ထားသော ဇာတ်ကွက်အကြောင်းအရာထဲက အချင်းအရာ၊ လှည့်ကွက်ထဲပရိယာယ်များ ပါဝင်သည်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် အခင်းအကျင်းအားလုံးသည် အံ့သြဖွယ်ရာ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဖြစ်သည်။၁၁ ဘုရားသခင်သည် လိုလေးသေး မရှိ၊ ပြည့်စုံသော ဇာတ်ညွှန်းဆရာကြီးဖြစ်သည်။
၆:၄–၁၁ နောက်တနေ့နံနက်သည် ဟာမန်သည် မော်ဒကဲအား သစ်တိုင်တွင် ဆွဲချီသတ်ရန် နန်းတော်ရင်ပြင်သို့ ဝင်လာသည်။ အာရွှေရုဘုရင်က ဟာမန်အား ရှင်ဘုရင်၏ စိတ်တော်ထိတွေ့စေသူအား မည်သို့ချီးမြှင့်သနည်းဟု မေးသည်။ ဟာမန်ကသူ့အား ရှင်ဘုရင်က ဆုလက်ဆောင် ပဏာချီးမြှင့်မည်ဟုထင်၍ တလေးတစားဖြင့် ရှင်ဘုရင်၏ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသူဖြစ်ကြောင်း မြို့ထဲသို့ လှည့်လည်ပြသသင့်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်ကဟာမန်အား ထိုကဲ့သို့ ချက်ချင်းပြုလုပ်ခိုင်းသည်။ သို့သော် ရှင်ဘုရင်က ဟာမန်အား ထိုကဲ့သို့ ချက်ချင်းပြုလုပ်ခိုင်းသည်။ သို့သော်ဟာမန်မဟုတ်။ မော်ဒကဲဖြစ်သည်။ ဟာမန်သည် မျက်မုန်းကျိုး မြင်ပြင်းကပ်၍ သတ်မည်တကဲကဲလုပ်နေသော မော်ဒကဲအား ဘုရင်ရှေ့တော်၌ ဂုဏ်ပြုလေးစားနေရပြီ။ “မာနသည် ပျက်စီးခြင်းအရင်၊ ထောင်လွားသောသဘောသည် ရှုတ်ချခြင်းအရင်၌ နေရာကျတတ်၏” (သု ၁၆:၁၈)။
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်ထိတွေ့စေသောသူမှာ ခရစ်တော်ဘုရားသာရှိပါသည်။ “ခပ်သိမ်း’သောသတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍ ယေရှုခရစ်တော်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ ဟု နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံသဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဘုန်းအသေရေတော်ကို ထင်ရှားစေကြမည့်အကြောင်းတည်း” ဟု ကျမ်းစာစကားသက်သေရှိပါသည် (ဖိ ၂:၁၀-၁၁)။
Total Visitors: 32,481
Author : William MacDonald
Believer’s Bible Commentary
Evangelical Literature Centre
No. 182/202, Room (2), 34th Street,
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
Copyright © 2019 The Believer’s Bible Commentary – Myanmar. All Rights Reserved.